Jakobho anobvisa vanamwari vekune dzimwe nyika (1-4)
Jakobho anodzokera kuBheteri (5-15)
Kuberekwa kwaBhenjamini; kufa kwaRakeri (16-20)
Vanakomana 12 vaIsraeri (21-26)
Kufa kwaIsaka (27-29)
35 Pashure paizvozvo Mwari akati kuna Jakobho: “Simuka uende kuBheteri+ ugare ikoko, ugadzirire Mwari wechokwadi atari ikoko, iye akazviratidza kwauri pawakanga uchitiza Isau mukoma wako.”+ 2 Jakobho akabva ati kumhuri yake nekuvanhu vese vaaiva navo: “Rasai vanamwari vekune dzimwe nyika vari pakati penyu,+ muzvichenese uye muchinje zvipfeko zvenyu, 3 uye ngatisimukei tiende kuBheteri. Ikoko ndichanogadzirira Mwari wechokwadi atari, uyo akandipindura pazuva rekutambudzika kwangu uye anga aineni kwese kwandanga ndichienda.”+ 4 Saka vakapa Jakobho vanamwari vese vekune dzimwe nyika vavaiva navo nemhete dzaiva panzeve dzavo, uye Jakobho akazvicherera* pasi pemuti mukuru wakanga uri pedyo neShekemu. 5 Pavakapinda munzira, Mwari akaita kuti vanhu vemaguta akanga akavapoteredza vabatwe nekutya, saka havana kudzingirira vanakomana vaJakobho. 6 Jakobho akazosvika kuRuzi,+ kureva Bheteri, munyika yeKenani, iye nevanhu vese vaakanga ainavo. 7 Akavaka atari ipapo, akatumidza nzvimbo yacho kuti Eri-bheteri,* nekuti Mwari wechokwadi akanga azviratidza kwaari ipapo paaitiza mukoma wake.+ 8 Dhibhora,+ mureri waRibheka akazofa akavigwa pedyo neBheteri pasi pemuoku. Saka akatumidza muti wacho kuti Aroni-bhakuti.* 9 Mwari akazviratidzazve kuna Jakobho achibva kuPadhani-aramu, akamukomborera. 10 Mwari akati kwaari: “Unonzi Jakobho.+ Hauchanzizve Jakobho, asi uchanzi Israeri.” Uye akatanga kumushevedza kuti Israeri.+ 11 Mwari akatizve kwaari: “Ndini Mwari Wemasimbaose.+ Bereka uwande. Uchava baba vemarudzi akawanda,+ uye madzimambo achabva kwauri.*+ 12 Ndichakupa nyika yandakapa Abrahamu naIsaka, uye ndichapa vana* vako vachauya mumashure mako nyika yacho.”+ 13 Mwari akabva akwira achibva panzvimbo yaakanga ataura naye. 14 Saka Jakobho akamisa mucherechedzo wedombo panzvimbo iya yaakanga ataura naye, akadurura mupiro wezvinwiwa pauri uye akadurura mafuta pauri.+ 15 Jakobho akaramba achishevedza nzvimbo iyo Mwari akanga ataura naye kuti Bheteri.+ 16 Vakazotama paBheteri. Pasara chinhambwe chakati rebei kuti vasvike kuEfrati, Rakeri akatanga kusununguka, uye marwadzo ekusununguka kwacho akanga akanyanya. 17 Asi paairwadziwa kudaro achisununguka mwana, nyamukuta akati kwaari: “Usatya, nekuti uchava nemumwe mwanakomana.”+ 18 Upenyu hwake pahwakanga hwava kuparara* (nekuti akanga ava kufa), akamutumidza kuti Bheni-oni,* asi baba vake vakamutumidza kuti Bhenjamini.*+ 19 Saka Rakeri akafa, akavigwa panzira inoenda kuEfrati, kureva Bhetrehema.+ 20 Jakobho akamisa dombo paguva rake; nanhasi iri ndiro dombo reguva raRakeri. 21 Israeri akazotama ipapo, akadzika tende rake ati pfuurei zvishoma nharire* yeEdheri. 22 Israeri paakanga achigara munyika iyoyo, mumwe musi Rubheni akanorara naBhiriha, murongo* wababa vake, uye Israeri akazvinzwa.+ Jakobho aiva nevanakomana 12. 23 Vanakomana vaakabereka naReya vaiva Rubheni dangwe rake,+ kwouya Simiyoni, Revhi, Judha, Isakari, naZebhuroni. 24 Vanakomana vaakabereka naRakeri vaiva Josefa naBhenjamini. 25 Uye vanakomana vaakabereka naBhiriha, muranda waRakeri, vaiva Dhani naNaftari. 26 Uye vanakomana vaakabereka naZiripa, muranda waReya, vaiva Gadhi naAsheri. Ava ndivo vanakomana vaJakobho vakaberekerwa muPadhani-aramu. 27 Jakobho akazosvika kuna baba vake Isaka kuMamre,+ iri kuKiriyati-abha, kureva Hebroni, kwakambogarwa naAbrahamu kukazogarwawo naIsaka vari vatorwa.+ 28 Isaka akararama makore 180.+ 29 Isaka akazofema kekupedzisira akafa, akaiswa kwakaiswa vanhu vekwake,* akwegura uye agutsikana neupenyu; uye vanakomana vake Isau naJakobho vakamuviga.+
^ Kana kuti “akazviviga.”
^ Kureva kuti “Mwari weBheteri.”
^ Kureva kuti “Muoku Wekuchema.”
^ ChiHeb., “achabva muchiuno chako.”
^ Kana kuti “mweya wake pawakanga wava kubuda.”
^ Kureva kuti “Mwanakomana Wekuchema Kwangu.”
^ Kureva kuti “Mwanakomana Weruoko Rwerudyi.”
^ Chivakwa chinoshandiswa kuona zviri kure.